Xagee Nooga timid Xagjirnimada Gaartay Ismiidaaminta? Xalkuse muxuu yahay? W.Q A-nuur Cabdulaahi CaliHiiraan | Hiiraan Net | Wararka somalia | Somali news | Warar, Quraan iyo Tafsiir.Hiiraan | Hiiraan Net |
Xagee Nooga timid Xagjirnimada Gaartay Ismiidaaminta? Xalkuse muxuu yahay? W.Q A-nuur Cabdulaahi Cali
by Yahye | Tuesday, Apr 10, 2012
Dadka is Qarxiyo waa kuwa ugu arxanka daran noolaha maxaa yelay waxay markasta salfadaan shacab aan waxba galabsan. Inkastoo argagixisada Soomaaliya ka howlgasho ay ku doodaan in ay bartiilmaamed ka dhigtaan dowlada riddada (dowlada gaalowday)-Waa sida ay ugu yeeraanee, hadana 99% dadka ku waxyeelooba ismiidaamintooda waa dad rayid ah oo aan wax shaqo ah ku laheyn siyaasad.
Inta aanan gudaha ugalin sababaha ku kalifaya qof soomaali ah inuu isqarxiyo aan guudmar yar ku sameeyo sida aynu u dhaqmi jirnay ka hor intii aan naloo soo safrin dhaqamadan martida nagu ah ee aanaan abb iyo isir midna u laheyn.
Dhaqankeenii hore iyo culimadii nabada jeclaa
Soomaalidu waa bulsho rabiggeey ugu nimceeyay dhaqan wanaagsan iyo diin xaniif ah. Marka aad taariikhda baaris ku sameyso waxaa kuu soo baxeyso in Soomaaliya ay diinta soo gaartay ka hor intii aysan gaarin magaalada barakeysan ee Madiinatul Munawarah, taa macnaheedu wuxuu noqonayaa inaan kamidnahay dadkii ugu horeeyay ee qaatay una gargaaray diinta islaamka.
In diinta islaamka ay ku faafto gayigeena iyo intabadan mandiqada afrika iyadoon dhiig dad ladaadin kuma eysan imaan riyo iyo ciyaarciyaar balse waxay ku timid dadaal iyo duco ay isku dareen culimadeenii asalka ahaa ee had iyo goorba noo sheegi jiray in muslimka dhabta ah uu yahay kan afkiisa iyo gacantiisa laga nabadgalo.
Culimada sidaa ugu soo dadaashay dalkeena waa Duruqu suufiyah oo ku abtirsada Ahlusuna Wal Jamaaca. Raacista manhajkooda iyo ka dambeyntooda waa kii an ku liibaanay ee nagaarsiyaay inaan noqono umadd 100% Muslim Ahlusuna ah.
Intii muddo ahba Soomaaliya waxaa ku soo badanayay kooxa magacyo diimeed wata iskuna sheegay inay iyagu yihiin kuwa sida saxda ah diinta Islaamka u fahmay hayeeshee uusan madaxdooda sare iyo kuwooda hoose uusan ku jirin hal wadaad oo ka mid culimadii lagu yaqiinay dalkeena.
Badankood wadaadada cusub waa wiilal dhalinyaro ah oo hadiiba ay wax uun barteen waxay sifiican ugu macalimeen sida loo hadlo marmarka qaar waxaan is iraahdaa waxay taqsus ku soo qaateen sida loo doodo hadalkana loo maceeyo.
Hadii la iga codsanlahaa inaan luqadeena hodankaa eray uga raadiyo dhalinta cusub ee muuqa culimada leh waxaan oran lahaa Afmiishaaaro. Howshii ugu horeysay oo ay qabteen waxay aheyd cayda iyo gaaleysiinta Shuyuuqdii diinta noo keenay ee sababna noogu noqday muslimnimadeena. Nasiib daro fekerka kooxa cusub wuxuu helay fursad dahabi ah kadib markii ay gabi ahaan burburtay dowladii xakameynlaheyd.
Dad u badan haween iyo da’yar ayaa gurbaanka u garaacay fahamkii galeysiiyay culimadii qadiimka ahaa maxaayeelay waxaa laga dhaadhiciyay in wixii Suufiyada u sheegijireen ay ahaayeen quraafaad la dhoodhoobay. Wixii ka dambeeyay raacista kooxaha labiska uga eg culimada waxay Soomaaliya u sii nuglaaneysay xagjirnimada iyo Kaligii Muslimnimada (Qof isku heesto asaga bes inuu Muslim yahay)
Waa maxay sababaha uu Qofku isku Qarxinayo?
Sababaha uu Qofku isku qarxinayo waa dhowr qeybood oo kala duwan. Midda koowaad nafti hafarku wuxuu aaminsanyahay inuu Alle ku raaligalinayo misna uu ugu dhawaanayo qarxinta naftiisa iyo halakeynta birimageydada.
Arxanlaawaha waxaa si kal iyo laab ah uga dhaadhacsan in aan Janada kabaha looga siibeyn wayoo wuxuu isku heestaa shahiid Daa’in agtiisa darajo iyo sharaf ku leh. Qiyaaliga layaabka leh ee maskaxda looga dhalanrogay waxaa ka mid ah in ismiidaamiyuhu uu dharaarta qiyaamo u shafeecayo 70 ruux oo ahalkiisa ah madaxiisana ay janada ku galayaan.
Qodobka ugu daran wuxuu yahay in nafti-hafarku uu gaalo madoow u heesto dadka uu isku qarxinayo mar hadiiba aysan aaminsaneyn fakarka Alqaacida. Qodobkan dambe wuxuu salka ku hayaa Kaligii Muslinnimada waana arin ay ka wada simanyihiin wadaada cusub walow ay ku kala ra’yi duwanyihiin habka iyo sida looga hirgalinkaro Soomaaliya.
Xagee nooga timid Xagjirnimada Gaartay Ismiidaaminta Xalkuse Muxuuyahay?
Waagii isticmaarku dalkeena ka talinayay ayaa Shiikh Muxudiin Macalin Mukaram oo ah caalim weyn oo Soomaaliya laga wada garanayo wuxuu meel fagaare ah ku gubay kutub uu ka soo uruuriyay makaatiib Muqdisho ku taalay, Kitaabadas waxaa nalooga soo safriyay Sucuudiga, dad caamo dhagaweyn u badan oo la anfariirsan Wadaad kitaabo gubaya ayaa weydiiyay waxa ku dhaliyay inuu kutub diimeed meel fagaare ah dab iyo baasiin ku qabadsiiyo.
Allah u naxariistee Shiikh Muxudiin wuxuu ugu jawaabay hadal taariikhda galay oo ahaa ‘Hadii Soomaaliya ay ku faafaan waxa ku qoran Kutubtaan, Soomali dhiig badan ayay iska daadindoontaa, laba isa salaantana waala weyndoonaa’
Sidii uu noogu dhacay qaranjabka iyo ka horba boqortooyada Sucuudiga oo ah dowladii ka dambeysay burburintii qilaafadii ugu dambeysay ee Islaamku lahaa ee la oranjiray Cusmaaniyiinta waxay Soomaaliya oo 100% Ahlusuna ah ku dhaxbeertay Wadaado xagjirro ah oo ay dhuuxa iyo lafahaba ka gashay Manhajka looyaqaano Wahaabisamka oo ah kan maantay dalkeena gaarsiiyay dhibaatada ugu xun.
Sucuudiga waa wadanka koowaad ee dhabarka ka wareemay dalkeena maxaa yeelay wuxuu gunta nooga talaalay Sun aan qiyaasayo inay muda qaadandoonto jirrid goynteyda.
Boqortooyadu waxay maal iyo maskaxba ku taageertay Ragga ay abuurtay ee misna aaminsan manhajka Wahaabiga ee ku saleysan Kaligii Muslimnida, intaa kuma ekeyn silica ay noo geysatay Borqortooyada reer Aala- Sucuud ee waxay nagu harqisay kutub xambaarsan fahamka sumeysayn ee Wahaabiyada oo aysan jirin wasaarad ama wakaalad dowli ah oo naga faafreebto.
Maxaa naga bi’ilahaa hadii sunta Sucuudiga ay ku ekaanlaheyd wax dhowr qof ay masjid ku aqristay, uma maleynayo inaan gaari laheyn heerka aan manta mareyno oo ah in meel fagaare ah la isku qarxiyo.
Fowdada iyo qaska ka jira dalka wuxuu u saamaxay Wahaabiyada laga biritaaro Riyaad in ay la wareegan ilaha muhiimka ah ee wadankeena sida, Ganacsiga, waxbarashada, Warbaahinta iyo ugudambeyn siyaasada.
Ayaandarro iyo musiibo noogama horeyn markii kutubtii uu kontameeyadii gubay Shiikh Muxudiin Macalin Mukaram ay manhaj waxbarasho u noqdeen caruurteena dhigata dugsi hoose ilaa jaamacad, durba wixii la filayay waa dhaceen, xagjirnimo, kaligii Muslim iyo galeysiin aan loo meeldayan, dabcan wixii xigayna sharaxaad uma bahno, waa camaliya istish haadiyah, erayga alqaacida u taqaan ismiidin.
Xalka wuxuu ku jiraa in Soomaali dhaqankeedii iyo culimadii saxda ahaa ay u laabtaan iyo in loo guntado dagaal dhinackasta ah oo dalka looga sifeynayo fahamkaan sumeysan. Waxaa caddaan ah inaan Wahaabinimada lagu tirtirikarin Xabbad oo qura, waxaa loobaahanyahay in waalidku ogaado macalinka wax u baraya cunugiisa waxa uu aaminsanyahay, Shiikha masjidka wax uga aqriyo wiilkaaga manhajka uu heesto.
Hadii sidaan Soomaali ku sii socoto oo la yiraahdo kii qamiis gashadaba waa Shiikh waxaan filnaabaa waa qarxiska iyo qaxarka oo sii toban jibaarmo.
Fiira gaar ah: Maqaalkeygu kuma saleysno caadifad ama cid u xaglin, hayeeshee waa baaris iyo taariikhda wax aan ku ogaaday.
W.Q. Wariye Axmednuur Cabdulaahi Cali – ahmednuur@journalist.com